Iindawo ezithandana kakhulu zokulala ngesondo
Iindawo ezithandana kakhulu zesondo zizo ezo ndawo unokuzonwabisa ngazo kwaye ubalekele zonke iintlungu kunye neengxaki ezizalisa ubomi bethu. Sikunika ithuba lokuqonda iingcamango zakho zothando kunye nokuxhamla ubudlelwane bakho nobomi bobulili kubo!
Iindawo esizicebisayo zothando ziphela nje "ukuwa kwebhakethi" xa kuthelekiswa noko unokucinga ngako. Abanye abathandana ngothando baqaphela ngokuvisisana ngesondo kwi-bedal in the petals of roses kwaye bacinga ukuba le ndawo yothando kakhulu emhlabeni. Kodwa sifuna ukukubonisa okuchaseneyo, into ephambili kukuba ukuthanda kwakho kufanele kube ngokwaneleyo ukuphinda ubu buhlobo. Ngoko, phambi kwakho uluhlu lweendawo ezithandanayo zokulala ngesondo.
Ukulala ngeselwandle .
Ukulala ngeselwandle kunomdla kakhulu. Ngokukodwa le ndawo inamathele emthandweni ebusuku, xa ukuthanda kwakho kukhanyiswa kuphela kwindlela yenyanga. Ewe, okanye ekuphumeni kwelanga phantsi kweemitha zokukhanya kwelanga. Yintoni engcono? Ngendlela, izazi zengqondo zibonakalise ukuba amanzi anempembelelo eninzi kwi-psyche yabantu. Ngoko ke, ukusuka elunxwemeni, hlela emanzini. Kusemanzini okuthandwa nguwe uthando kuya kukunceda uzive ubaleke kwaye uhlambele ngokupheleleyo. Ewe, ukuba ufuna ubumfihlo obuphelele kunye namanzi kwaye unesiqiniseko sokuthi uwedwa, uhamba ngomkhumbi we-inflatable mattress ukusuka elunxwemeni uze unikezele ngentloko yesithando sothando. Ngoko ubulili elunxwemeni alulwanga nganto kuluhlu "lweendawo ezithandanayo zokuthanda uthando."
Isondo kwintente .
Yintoni engcono kunokwenza uthando ententeni ekuntambeni, xa ukuthula kulawulwa ehlathini kunye ne-nightingales kuphela ekhwela ama-tunes amahlathi. Ewe, kunye neenkumbulo zothando zesini sakho ekucoceni kwehlathi, ententeni, ziya kuhlala zikhunjulwe kwixesha lakho. Ngoko, xa uhamba uhambo, qiniseka ukuthatha kunye nawe indlu yentente, ngokuqinisekileyo ekukukhonzeni njengendawo yokuvuyela uthando.
Ukwabelana ngesondo kwindawo yengca .
Ukuya kwindalo, thatha kunye nesigqubuthelo kunye nesilungiso sezinyoyi. Ngokuqinisekileyo baya kukunceda. Emva kwendawo yokuthandana ngesondo kufuneka ungaboni. Ngendlela, ayikho ingozi yokuba kwiifilimu ezininzi iifenethi ze-frank zidutshulwa emoyeni ovulekile. Kwaye abalobi bale miboniso babelungile. Khawucinge nje ukuba kuthanda kangakanani. Ngoko lixesha lokuba uzame wena. Ewe, akukho bani uxela ukuba kunzima ukufumana indawo eyincithakalo kwiipaki kunye nezikwere. Ngoko unokuphepha ukukhangela okunzima uze, umzekelo, ukuya epikinikini ehlathini. Ukulinganisa ngokwemvelo yinto oyifunayo. Kodwa, ngokubaluleke kakhulu, thobela ingqalelo ukuba i-kufuphi kufuphi yayingekho nhlobo okanye i-bush with nets. Ngaphandle koko, ukuthanda uthando lwakho ngotshani kunokufumana umbala ogqithiseleyo. Yaye intshontsho inokukuhlasela ngokukhawuleza kunokuba unxamnye nomnye. Le yilapho kuza kufika ixesha lokusebenzisa izilumko zamanthambo. Ngoko, ukuba ucinga kwangaphambili ngale nto, uthando lwakho aluyi kusongelwa.
Ukwabelana ngesondo kwi-hayackack .
Ukulala ngesini kwidolophana kwi-hayloft - ngokuqinisekileyo kuya kukholisa izibini zothando. Yaye oko, kunzima, kufudumele kwaye kulula. Ewe, ukuba wena, ngelixa uvakashele ootatomkhulu, awufumananga i-hayloft, uze ufike entsimini apho umoya ovuthayo kunye neqhumiso lomnxanxu olusandul 'uqobo luya kukunceda uzive njengabantwana bendalo. Ngendlela, kwaye kumnandi kwaye kumnandi emva kokuba ulwabelana ngesondo ufumane ingca eyomileyo. Ngelizwi, nantsi ke, uthando. Ngoko ubalekele kwindlela yokuthutha kwaye uxoxe. Uziva njengomalusi nomalusikazi!
Ngokugqithiseleyo, kodwa, uyabona, uthanda kakhulu. Ngoko ke, usezandleni zakho ezo zitikiti ezixabisekileyo, kwaye ulindele uhambo olude ulindelwe, umzekelo, elwandle. Kwaye ke wena kunye nomthandi wakho ukhululekile kwaye ukhululekile kwimoto yakho. Kutheni uchitha ixesha? Umzila wendawo yeklasi yokudibanisa imizimba yamabini amabini. Le ndawo inomtsalane yonke into: kokubili ukunyakaza, kunye neqhosha elinomdla kunye nesisigxina sevili kunye nomhlaba ohamba ngefestile kwaye uhleli phantsi. Kunokuba ungaboni uthando lwebali malunga nababaleki ababini. Ngelizwi, oku kufuneka kuqinisekiswe ngoku. Ngendlela, sinokululeka ukuba ungabi ngesondo kwisitulo esigcinwe, kuba asiyithandani kwaye iyingozi kakhulu. Ngoko ke, ukuba ufuna ukuvalelwa okwenene nokungazilibaleki, ngoko kuphela ukukhawulela okufanelekileyo.
Ubundlobongela kwimvula .
Khawucinge ukuba unomnye wakho othandekayo kwindawo elunxwemeni elingenalutho. Kwaye ke, ngaphandle kwelanga, amafu avaliwe ilanga, kwaye iphunga lesiphango sezulu sasisindayo emoyeni. Ewe, kweso sikhashana bonke abantu abanengqiqo, baqokelele ngokukhawuleza, baya ekhaya. Kodwa apha awukwazi ukuthatha ixesha. Kwaye ngokukhawuleza xa imvula yokuqala yemvula iwela kwisihlabathi esitshisayo, wena, uqokelele yonke into eyayinayo, kwiingubo ezimanzi zamanzi, ugijime kumthi omkhulu. Kulapho, ukufudumala, udibene kunye nomnye, kwaye ke wathinjwa ngentshiseko apho wahamba khona. Ngendlela, bathi ngexesha lokwabelana ngesondo, iimvakalelo ezintle kakhulu zizifudumala ezinkulu zemvula zasehlobo, ezize zame ukuwela emthini ukuya emhlane wakho.
Izibini ezithembekileyo zizama ukulala ngesondo ngokuzityhala imvula. Kwaye oku kunomtsalane ngakumbi kunokwenza ekhaya ekhaya eshahleni. Ngendlela, ukuba unayo i-balcony okanye loggia ekhaya, kwaye bahlala kwindawo efihlakeleyo emehlweni abantu, basebenzise. Iindawo ezinjalo zothando zixhamle kwiimvakalelo ezingenakuqondakala nje kuphela kwimvula, kodwa nakwiimitha zelanga okanye izibane zedolophu yasebusuku.
Ewe, ukuba ungumxhasi wothando lomtshato olungena ngaphaya kwendlu, musa ukuzibeka kwisondo kwi-bed of rose pals, kwaye uhambe kwindawo yokuhlambela nge-foam okanye, ukuba unendawo yomlilo, ulala ngesantya. Futhi ungalibali ngeemakhandlela kunye nomculo wothando.
Kwaye ekugqibeleni, indawo zokulala ngesondo iyahlukahluka, into ephambili ihlala igcina imigangatho yokuziphatha kwaye ingayi kuhamba ngaphaya kwemida. Emva koko, isondo sisisongweni esithandanayo kukuba abantu babini kuphela kufuneka bafumane!
Indlela yokunceda umntu abe nemihlali?
Ngaba ubulili bubalulekile kubundlelwane?
Intombazana ingayenza njani isondo emva komhla wokuqala?
Impembelelo yesondo kwimpilo yesintu
Unonwabo olukhulu kunesondo, yintoni na?
Indlela yokubuyisela umnqweno wesini
Indlela yokuphatha i-cystitis kubafazi
I-Spaghetti ene-shrimps kwi-sauce e-creamy
Ubunqunu kunye nomntu wesilisa - ingqondo
Ipalamente yaseCanada eSpain
Imihla yeenwele kunye namavithamini: zokupheka zasekhaya ezifanelekileyo
Iipropati ezisebenzayo neziyingozi zekhofi yendalo
Ziziphi iimpahla zokukhetha kwiofisi
IJam ukusuka kwii-orange crusts
Indlela yokukhulisa i-gerbera ekhaya